Madaxeynaha Jubbaland iyo safiirka Qatar ee soomaaliya oo kulmay | Dusta News
Home > General > Madaxeynaha Jubbaland iyo safiirka Qatar ee soomaaliya oo kulmay
June 18, 2020 June 18, 2020 Dusta News127Leave a Comment on Madaxeynaha Jubbaland iyo safiirka Qatar ee soomaaliya oo kulmay
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xaruunta Madaxtooyada maamulkaas ku qaabilay Safiirka Dowlada Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamza Asad .
Safiirka iyo Wafdiga uu hogaaminayo oo Magaalada Kismaayo u tagay furitaanka Mashaariic Dowlada Qatar ay ka fulisay Jubbaland ayaa waxaa kamid ah Masuuliyiin sidoo kale kasocda Hay’ada gargaarka Dalka Qatar iyo xubno kale.
Madaxweynaha maamulka jubaland Axmed Madoobe ayaa u mahad celiyay Safiirka kuna amaanay dowladda qadar Adeegyada hormarineed oo ay ka fulisay Jubbaland iyagoo ka wadahadalay sidii loo dardar galin lahaa mashashaariicda Horumarineed ee laga fulinayo maamulka sida Adeegyada Caafimaadka Waxbarashada Beeraha iyo garoomada Diyaaradaha.
Safiirka dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa markiisii ugu horeysay gaaray Juballand ka dib aqoonsigii dowladda soomaaliya aqoonsatay maamulkaas.
Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay wafdi ka socday itoobiya
Wafdiga ka socday Qatar oo mashaariic ku daah furay Kismaayo
Somaliland Oo War Kasoo Saartay Shirkii Dhawaan Lagu Soo Gaba Gabeeyay Muqdisho
Shacabka degmada Mahadaay oo go’doon ku jira
Dr. Abiy Axmed oo hortagay baarlamaanka dalkaasi ayaa wacad ku maray in uusan ogolaan doonin in Itoobiya burburto